WARSAXAAFADEED UU SOO SAARAY XISBIGA CADAALADA IYO DARYEELKA UCID | Toggaherer's Weblog
Date, April 13, 2009
Xisbiga Cadaaladda iyo Daryeelka (UCID) waxa uu rumaysanyahay in wadanka ay ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaala si loo sii wado geedi socodka dimoquraadiyadda, waxaanu diyaar u yahay in uu u tartamo doorashada madaxdooyada ee 2009.
Xisbiga UCID waxa uu rumaysanyahay in ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan wadanka lagu furdaamiyo wada hadal iyo wada tashi, waxaanu diyaar u yahay in uu ka qaybgalo wada hadalka iyo wada tashiga siyaasadeed (Political dialogue) ee Axsaabta Qaranka.
Xisbiga UCID waxa uu rumaysanyahay mudada cusub ee uu qabtay kominshanka Doorashooyinka qaranku (KDQ) oo ah September 27, 2009 in aanay wax wada tashi ah kala yeelan Axsaabta Qaranka JSL go’aanka ay keligood qaateenna si Adag ayaan u Cambaareynaynaa. Go’aankani kama turjumayo rabitaanka shacbiga, dibna waxa uu u riixayaa wakhtigii doorashada la qabanlahaa isla markaana lagu beegay bishii cibaadada ee Rabadaanta.
Xisbiga UCID waxa uu rumaysanyahay in Saddexda Xisbi Qaran ka wada shaqeeyaan sidii loo heli lahaa doorasho loo simanyahay Hantida Qaranka, warbaahinta Qaranka, Gaadiidka Qaranka, Ciidamada Nabadgelyada ……. IWM.
Xisbiga UCID waxa uu Aaminsanyahay in muddada xilka ee Madaxweynah iyo Madaxweyn ku xigeenka uu yahay shan (5) sano sida ku cad Q-88 farqadiisa 1aad. Hadaba sida lawada ogyahay Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku Xigeenka waxay mudadoodii ku Ekayd May 14, 2008, markii doorashadii dib udhacdayna waxa la waayey wax sharciya oo lagu kala baxo oo muddo kordhin lagu sameeyo, marka laga reebo Qodobka Dastuuriga ah ee Q-83 oo ay ku xidhantahay shardiga ah in ay jirto Aafo.
Sidaas awgeed sharciyada Xukuumadda talada haysa waxay ku timi heshiiskii Saddexda Xisbi Qaran oo ka bilaabmay June 9, 2008 kuna dhamaanaya May 5, 2009. Hadab waxa halkan ku cad in sharciyada xukuumaddu ku Egtahay sida kor ku xusan May 5, 2009.
Heeshiiskan ka dhexdhacay Saddexda Xisbi Qaran June 9, 200 (KDO/XK/540/08) waxa uu si cad u sheegayaa haddii dib u dhac danbe ku yimaado doorashada in Saddexda Xisbi Qaran kordhinta wakhtiga Madaxweynaha iyo ku Xigeengiisa (extension) ay talo heshiisa ka gaadhaan waxa ay ku heshiiyaana uu G/Guurtidu Ansixiyo isaga oo aan waxba ku darayn.
Sidaas awgeed, waxa Xisbiga UCID Aaminsanahay in aan la fulin heshiiskaas la wada galay. Hadaba waxaan u soo jeedinaynaa labada Xisbi Qaran ee KULMIYE iyo UDUB in miiska wada hadalka la soo fadhiisto ka hor 5-ta May , 2009 si loo xaliyo khilaafka siyaasadeed dalkuna u helo xasilooni iyo degenaasho, dalkuna ugu dhicin xukuumad la’aan (power vacuum).
G/Guurtidu may tixgelin soo jeedintii GDQ ee May 31, 2009 wax Talo ahna may weydiin Axsaabta Qaranka iyo GDQ midna, taas darteed muddo kordhintii ay sameeyeen 42-ka mudane waxay ahayd Afduub Ummadda loo geystay kuna saleysnayn wax sabab ah oo caqli gal ah. Taas darteed, waxaan xukuumadda u soo jeedinaynaa in dib loogu noqdo heshiiska Saddexda Xisbi Qaran iyo KDQ saldhigna looga dhigo wada hadalka siyaasadeed.
Madaama wax Talo ah laga weydiin Axsaabta Qaranka , Interpeace iyo deeqbixiyayaasha toona Go’aanka GDQ ku mudeeyey Doorashada Madaxdweynaha iyo Madaxweyn ku Xiigeenka islamarkaana uu ka hor imanaayo mudayntoodii hore ee March 29, 2009, ee ay hadana ku codsadeen in loogu kordhiyo 91 cisho oo ay cadeyeen inay ku qabanayaan doorashada iyadoo aan dib u dhac dambe ku imaneyn, Xisbiga UCID waxa uu arkaa in talaabadani ka soo hor imanayso nidaamkii ku dhisnaa wada tashiga ee ka dhaxeeyey Axsaabta Qaranka iyo GDQ.
Hadaba GDQ oo hore ugu caanbaxay shaqo xumi iyo wada shaqayn la’aan dhexdooda ah iyo Asxaabta Qarankaba, dhawr jeerna la soo hadal qaaday sidii loo beddeli lahaa hadana ay ku cadaatay in ayna xisbiyada dhexdhexaad u noqon karin markay soo saareen muddadan cusub iyaga oon cidna la tashan oo xataa ka duwi kari waayeen bisha Rabadaan ee barakaysan. Xisbiga Cadaaladda iyo Daryeelka (UCID) waxa uu si cad u u taageeryaa in dib u eegis iyo dib u qiimeyn lagu sameeyo hogaanka kominshinka iyo xubnaha komishinka axsaabta qarankuna ka wada hadlaan in GDQ ee hadda jiraa dalka gaadhsiin karin Doorasho Xor oo Xalaal ah. KDQ waxay lumiyeen kalsoonidii Xisbiga UCID.
Xilligan la marayo oo ah wakhti xasaasiya xiisad siyaasadeedna taagantahay ayey xukuumaddu wadaa caga juglayn, cabudhis, daandaansi iyagoo isku deyaya in ay xoog ku muquunshaan xisbiyada mucaaradka ah iyo saxaafada madaxa banaan. Waxaan ka digeynaa in talaabooyinkaasi keeni karaan iskudhac xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah oo dhalinkara nabadgelyo xumo iyo burbur Qaran.
Xisbiga UCID wuxuu Aaminsanyahay in bulsha kasta oo ku nool dal dimoqoraadiya in ay mudaharaad salmi ah samayn karaan taas oo ah xuquuda asaasiga ah ee Dastuurka caalamiga ahi (international laws) iyo kan Somalilandba xalaaleeyey. Hadaba Xisbiga UCID waxa ay si adag u canbaareeynayaan:
dhacdadii xadgudubka ahayd ee loogu gaystay Gudoomiyaha xisbiga UCID Eng. Faysal Ali Waraabe kantaroolka galbeed ee ku yaala magaala madax gobolka Gebilay markii uu ka soo laabtay gurmadkii kormeerka ahaa ee uu ku tegay degmada wajaale April 4, 2009 (Taliyiihii saldhiga wajaale ee ku hanjabay in uu xabad ku dhufanayo Gudoomiyaha Xisbiga).
Rasaastii lagu furay Taageerayaasha Xisbiga Kulmiye maalintii isniintii April 6, 2009.
Dhacdadii dhacday April 11,2009 ee ka dhacday Xafiiska Xisbiga Kulmiye ee gobolka Togdheer khasaarahana loogu geeystay suxufiyiinta iyo qalabkoodii.
Iibinta sharci darada ah ee la iibinayo Hantida Maguurtada ah ee Qaranku leeyahay sida guryaha Hindiyan laynka iyo magaalooyinka kale iyo dhulka banaan ee danta guud ah.
Xisbiga Cadaaladda iyo Daryeelka (UCID) waxa u soo jeedinayaa labada xisbi UDUBiyo Kulmiye in ay joojiyaan wixii keenaya nabadgelyo xumo ee khalkhalna gelinaya wadanka.
Madaxweynaha JSL waxa aanu u soo jeedinaynaa sidii aanu marar badan oo hore uga codsanay in u furo albaabka wadatashiga, si dhakhso ahna wada hadal ula yeesho xisbiyada mucaaradka, nabadgelyada iyo sumcada wadankana ilaaliyo.
Ugu dambeyntii waxaanu munaasabadani shirka jaraa’id mar sadexaad baaq nabadgeliyo u soo jeedinaynaa beelaha walaalaha ah ee dagaaladda soo noqnoqday ku dhex mareen degaamada u dhaxeeya Gebilay/ Dila/ Baki. Waxaan kaloo u soo jeedinaynaa beelahaa walaalaha ah in ay tixgeliyaan gurmadka Reer Somaliland ee ku wajahan nabadeyntooda iyo in ay joojiyaan dhiigdambe oo daata geedka wada hadalka yimaadaan.